अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै : जिग्री भन्छन यस्तो बेला हास्ने की रुने ! – Ramailo Sandesh
काठमाडौं – हाँस्य टेलसिरियल भद्रगोल र सक्कीगो नी बाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्ने तयारीमा छिन् । लामो समय देखि हाँस्य टेलसिरियल र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकी रक्षा गर्भवती भएकै कारण कलाकारिताबाट ब्रेक लिने बताइएको छ ।अघिसम्मकी ‘मोडल रक्षा श्रेष्ठ’ अहिले ‘भद्रगोलकी रक्षा’को नामले परिचित छन् ।
विगत डेढ वर्षदेखि हास्य टेलिशृंखला भद्रगोलमा आवद्ध भएपछि उनको परिचय फेरिएको हो । परिचय मात्र फेरिएको छैन, उनको चर्चा पनि चुलिएको छ । हुन त भद्रगोलमा आउनुअघि उनले दुई दर्जनभन्दा बढी विज्ञापनमा मोडलिङ गरिसकेका थिइन् भने केही म्युजिक भिडियो र र्याम मोडलिङमा पनि उनको जादु चलेको थियो ।उनी अब पुनः प्रशारण हुन लागेको ‘सक्किगो नि’ मा नदेखिन सक्ने बताइएको छ ।
सुटुक्क विबाह गरेकी रक्षा आमा बन्न लागेको कुरा हालै एक युट्युव अन्तरवार्तामा सक्कीगो नी टिमले खुलाएका थिए । यसै क्रममा कुमार कट्टेल जिग्रि ले एउटा फेसबुक स्टाटस हाल्दै भनेका छन् ‘यस्ताे बेलामा हाँस्ने की रुने , हामी सबैको प्यारी रक्षा अामा बन्दै ।
अभिनेत्री गौरी लेख्छिन्, ‘धरहरा उठ्यो, मेरो ओठमा गर्वको मुस्कान छैन’
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि ढलेको धरहरा ६ वर्षपछि वैशाख ११ अर्थात् आजबाट औपचारिक रुपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धरहराको उद्घाटन गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले धरहराको नयाँ स्वरुपको तस्वीर राखेर खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले भने कोभिडको यो महामारीमा धरहरामा लगानी गर्ने रकम अस्पताल निर्माणमा खर्च गरेको भए झन राम्रो हुने थियो भन्दै सुझावसहितको आलोचना गरिरहेका छन् ।
यही मेसोमा अभिनेत्री गौरी मल्लले पनि फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै धरहराले बलियो बनोट पाएकोले सानले एकपटक आफ्नो शीर ठाडो बनाउन सक्षम बनेको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘धरहरा पटक–पटक ढल्यो र पटक–पटक उठ्यो पनि । लाग्छ यो पाली धरहराले बलियो बनोट पाएको छ । सानले पुनः एक पटक आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सक्षम बन्यो,’ उनी लेख्छिन्, ‘धरहरा त उठ्यो र पनि मेरो ओंठमा गर्वको मुस्कान छैन । धरहराले जस्तै मेरो देशले कहिले उठ्न पाउने ? मेरा देशवासीको पनि धरहराको जस्तै त्यो बलियो जग भएको जीवनस्तर कहिले बन्ने ?’
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘हरेक कोण–कोणबाट गिराइसकिएको मेरो देशले सानले फेरी कहिले शिर उठाउन पाउने..? धरहराले जस्तै….. ! हो, धरहरा त उठ्यो तर हामी कहिले उठ्ने ???’